सरकारी कम्पनीले बेच्यो रू. १ करोडभन्दा बढीको खसीबोका « Sajhapath.com
काठमाडौं,असोज २४ । सरकारी कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दशैंका लागि सहुलियत मूल्यमा पहिलो दिनमै रू. १ करोडभन्दा बढीको खसीबोका विक्री गरेको छ । दशैंका लागि २ हजार खसीबोका विक्री गर्ने लक्ष्य राखेर कम्पनीले काठमाडौंस्थित आफ्नो कार्यालयबाट शनिवारदेखि सुपथ मूल्यमा खसीबोकाको विक्री शुरू गरेको हो ।
कम्पनीले असोज १ गतेदेखि थालेको सुपथ मूल्य पसलबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विक्री केन्द्रहरूमार्फत हालसम्म करीब ६ सय क्वीन्टल खाद्यान्न विक्री गरेको छ । सुपथ मूल्य पसलअन्तर्गत कम्पनीले दाल, चामल, जुम्लाको सिमी, चिनी, घिउलगायत खाद्यान्न विक्री गरिरहेको छ । आर्थिक अभियानबाट